Abavelisi benzi be-oksijini ye-oksijini ekwi-Intanethi china ababoneleli
I-BH-485-DO Isisombululo se-Oxygen esichithwe kwidijithali
I-BH-485 uthotho lwe-oksijini yanyibilika kwi-Intanethi, yamkela i-electrode yohlobo lwebhetri yentsusa, kunye ne-electrode yangaphakathi ukufezekisa imbuyekezo yobushushu obuzenzekelayo kunye nokuguqulwa kwesiginali yedijithali. Ngempendulo ekhawulezileyo, iindleko zokugcina eziphantsi, imilinganiselo ye-intanethi yexesha lokwenyani. I-electrode yamkela inkqubo esemgangathweni yeModbus RTU (485), unikezelo lwamandla lwe-24V DC, imowudi yocingo ezine, kunokuba lula kakhulu ukufikelela kwinethiwekhi yesenzi.
I-DOG-209FYD Optical Dissolve Oxygen isivamvo
I-DOG-209FYD inyanzelise i-oxygen sensor isebenzisa umlinganiso we-fluorescence we-oksijini enyibilikisiweyo, ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka okukhutshwe ngumaleko we-phosphor, into ye-fluorescent iyavuya ukukhupha ukukhanya okubomvu, kwaye into ye-fluorescent kunye nokuxinana kweoksijini kuyalingana ngokuchanekileyo nexesha lokubuyela emhlabeni imeko. Indlela isebenzisa umlinganiso we-oksijini echithakeleyo, akukho milinganiselo yokusetyenziswa kweoksijini, idatha izinzile, intsebenzo ethembekileyo, akukho siphazamiso, ufakelo kunye nokulinganisa okulula. Isetyenziswa ngokubanzi kwizityalo zonyango lwamanzi amdaka kwinkqubo nganye, izityalo zamanzi, amanzi aphezu komhlaba, inkqubo yemveliso yokuvelisa amanzi kunye nonyango lwamanzi amdaka, ezaselwandle kunye namanye amashishini ekubekeni iliso kwi-DO.
I-DOG-209FB Isisombululo somoya se-Oxygen Sensor
I-DOG-209FB ichithwe i-oksijini i-electrode inokuzinza okuphezulu kunye nokuthembeka, okunokusetyenziswa kwimeko engqongqo; ifuna ulondolozo oluncinci;
I-DOG-209FA yeShishini esinyibilikise isivamvo seoksijini
I-DOG-209FA yohlobo lwe-oksijini ye-oksijini ephuculweyo ukusuka kwi-oksijini ye-oksijini eyanyibilika ngaphambili, tshintsha uvalo kwi-grit mesh membrane yensimbi, ezinokuzinza okuphezulu kunye noxinzelelo lokumelana noxinzelelo, inokusetyenziselwa imeko enzima ngakumbi, ivolumu yolondolozo incinci, ilungele unyango lwelindle lwedolophu, unyango lwamanzi amdaka kwimizi-mveliso, i-aquaculture kunye nokubeka iliso kwindalo esingqongileyo kunye neminye imimandla yokulinganisa okuqhubekayo kweoksijini echithakeleyo.
I-DOG-209F Isisombululo somoya se-Oxygen
I-DOG-209F ichithwe i-oksijini i-electrode inokuzinza okuphezulu kunye nokuthembeka, okunokusetyenziswa kwimeko engqongqo; ifuna ulondolozo oluncinci
I-DOG-208FA Ubushushu obuPhezulu bunyibilike isivamvo seoksijini
I-DOG-208FA i-electrode, eyilelwe ngokukodwa ukuba inganyangeki kwi-130 degrees sterilization, uxinzelelo oluzenzekelayo lokulinganisa ubushushu obuphezulu obuchithwe i-oksijini electrode, kulwelo okanye igesi inyibilike imilinganiselo yeoksijini, i-electrode ifaneleke kakhulu kwinqanaba elincinci le-microcial reactor inyibilike amanqanaba eoksijini emgceni. Ingasetyenziselwa ukubeka iliso kwindalo esingqongileyo, ukucocwa kwamanzi amdaka kunye nokulinganisa kwasemanzini kumgangatho wokulinganisa ioksijini.
I-DOG-208F Isisombululo somoya se-Oxygen
I-DOG-208F ichithwe i-Oxygen Electrode esebenzayo kuMgaqo wePolarografi.
Ngeplatinum (Pt) njenge-cathode kunye ne-Ag / AgCl njenge-anode.
I-BH-485 uthotho oluchithwe kwi-intanethi i-oksijini electrode, yamkela uhlobo lwebhetri yentsingiselo yomoya oksijini, kunye ne-electrode yangaphakathi ukufezekisa imbuyekezo yeqondo lobushushu kunye nokuguqulwa kwesiginali yedijithali. Ngempendulo ekhawulezileyo, iindleko zokugcina eziphantsi, imilinganiselo ye-intanethi yexesha lokwenyani. I-electrode yamkela inkqubo esemgangathweni yeModbus RTU (485), unikezelo lwamandla lwe-24V DC, imowudi yocingo ezine, kunokuba lula kakhulu ukufikelela kwinethiwekhi yesenzi.